काठमाडौँ । नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स सङ्घको मेला ‘नाडा अटो सो’ मा करीब रु एक अर्ब बराबरको कारोवार भएको छ । यही भदौ २६ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको मेलामा नयाँ ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे, ठूला सवारी साधनका साथै तीनका पार्टस्पूर्जाको कारोवार भएको छ । करीब ६० हजार दर्शकले अवलोकन गरेको उक्त मेलामा देशका...
अटो शोमा सार्वजनिक गरिए रनरका ५ बाइक, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शोमा बंगलादेशी बाइक कम्पनी रनरले आफ्ना ५ नयाँ मोडल एकैपटक सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले १५० देखि २५० सीसी सम्मका स्पोर्ट्स सिरिज, डर्ट बाइक, स्ट्रिट बाइक र प्युअर स्कुटर रेञ्ज नेपाली बजारमा उतारेको हो । कम्पनीले आकर्षक मूल्य र विभिन्न स्किमका साथ यी बाइक उपलब्ध गराएको बताएको छ । कम्पनीले...
नाडामा स्कूटर खरीद गर्नेको मारामारः भेस्पा, अप्रिला र मियामामा आकर्षण
-भक्तराज रसाइली काठमाडौ । इटालियन कम्पनी पियाजियोको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता दिब्यज्योति ग्रूपअन्तर्गतको डी लाईफ स्टाईलले १३ औं नाडा शोमा प्रस्तुत गरेको भेस्पा र अप्रिला ब्राण्डका स्कूटरले ग्राहकको ध्यान तानेको देखिएको छ । भेस्पा नट्टी १२५ सिसि ३ भल्भ सहितको फिचरमा टाउकोबाट पुच्छरसम्म सिङ्गल बडी शुद्ध स्टीलबाट बनिएको...
नाडामा ग्राहकको ध्यान तान्दै बजाजको नयाँ पल्सर र ईको ईन्फिटिका इलेक्ट्रिक स्कूटर
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । युवाहरूको अत्यधिक रोजाईको बाईक पल्सरले १५० सिसिको पल्सर 150 TD नाडा अटो शोको १३ औं सस्करणमा सार्वजनिक गरेको छ । बजाज कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारित बिक्रेता हंशराज हुलासचन्दका कर्पोरेट सेल्स अफिसर प्रज्वल प्रधानका अनुसार यो बाइकमा डबल डिस्क,१२० ८० १७ ट्युबलेस टायर, १२ भोल्ट ब्याट्री र अटो हेड्ल्याम्प लगायतका...
अब रु.१९,९९९ डाउनपेमेन्टमै बजाजको डिस्कभर !
काठमाण्डौ । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने मोटरसाइकल ब्रान्ड बजाजको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले ग्राहकहरुद्वारा सर्वाधिक रुचाइएकोे बजाज डिस्कभरमा न्यूनतम डाउनपेमेन्ट स्कीम सुरु गरेको छ । यस स्कीम अन्तर्गत बजाज डिस्कभर खरिद गर्दा अब मात्र रु. १९,९९९ को न्यूनतम डाउनपेमेन्ट तिरे पुग्नेछ ...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । स्कोडाका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लूले नाडा अटो शो २०१८ मा कोडियाक कार लञ्च गरेको छ । कम्पनीकी हस्पिटालिटी अफिसर अनुसा केसीका अनुसार ७ सिटे फूल सीयुभी कोडियाक कार २ हजार सीसी को हो । युरोपियन नवीनतम गाडीमा डिजल ईञ्जिन र अन्य थुप्रै विशेषता रहेका उनले बताइन् । ९ वटा एयरब्याग सुबिधा रहेको...
नाडामा फोर्डका विभिन्न मोडलका कार, हातहातै उपहारदेखि स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणसम्मको अफर
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तरगत फोर्ड कम्पनीले नाडा अटो शोमा फेस्टिभ अफर राख्दै कम्पनीका विभिन्न मोडलका कारहरु प्रस्तुत गरिएको छ । अफरअन्तर्गत स्योर सट प्राइज अनुसार म्याकबुक प्रो, सामसङ्ग ग्यालेक्सी एस नाईन प्लस, वन प्लस सिक्स, सामसङ्ग ४०, एलईडी टीभी र आइप्याड रहेकोमा बम्पर ड्रमार्फत ५ जोडीलाई स�...
अटो वाच: हुण्डाईको विद्युतीय कारमा सबैको चासो
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शोमा हुण्डाई गाडीको स्टलमा ग्राहकहरुको निकै ठूलो घूँइचो लागेको छ । हुण्डाईको स्टलमा अधिकांशको रोजाई तथा चासोको बिषय विद्युतीय गाडी रहेको छ । सो शोमा सबैको रोजाईको केन्द्रबिन्दू इलेक्ट्रोनिक भेहिकल आयोनिक इलेक्ट्रिक पनि हो । हुण्डाई परिवारका एजीएम...
नाडामा इटालियन कम्पनीका मोटरसाइकल सार्वजनिक, मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नाडा अटो शोको अवसरमा नेपालमै पहिलो पटक इटालियन कम्पनी एसडब्लुएम मोटरसाइकल सार्वजनिक गरिएको छ । एसडब्लुएम मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा ज्ञान ग्रुप अन्तर्गत ज्ञान अर्थमुर्भस प्रा. लि.ले यी बाइक भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा प्रारम्भ भएको नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गरेको हो । प्रारम्भमा एसडब्लुएमका...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तिर्ने क्षमताको विकास नगरी ऋण लिएर गाडी खरीद गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नाडा अटो शो २०१८ मा उद्घाटन मन्तव्य दिंदै अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋण लिएर धेरै गाडी नकिन्न अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई समेत आग्रह गर्दै भने–‘कमाएर गाडी किन्नुपर्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको विकास नगरी गाडी...